यु आर नो मोर भर्जिन - Nepali Sex Tube
अझ सम्म भन्नु पर्दा परिश्रम अनुसारको मेरो ब्यापार राम्रै हुदै थियो । एफ एम को विज्ञापनले राम्रो नाफा भएपछी मैले टि-भी मा पनि बिज्ञापन दिने विचार गरें । म क्यामराम्यान र एकजना
मोडल युवती शुटिंग का लागि मुस्तांग लाग्यौं । स्पट बोय उतै पाउने, खाली लाइट काठमाडौँ बाट लगे पुग्ने सल्लाह अनुसार हामि ३ जना मात्रै जान लागेका थियौं । मुस्तांग बास्तवमै सुन्दर थियो । मौसम ले कहिले काही साथ नदिदा शुटिंग लम्बिन सक्छ भनेर फर्किने प्लेनको टिकट किनेका थिएनौं, त्यो बाहेक हामीले राम्रै संग शुटिंग सिध्यायौ ।
अचानक क्यामराम्यानको काठमाडौँ जानु पर्ने भएकाले हामीले शुटिंग सकिएकै दिन फर्किन टिकट खोज्यौ । तर टिकट पाइएन । तिन गुना बढी तिरेर क्यमरम्यन्लाई पठाइयो । म र मोडल युवती अर्को फ्लाइट कुर्ने मा पर्यौ । बिहिबारको फ्लाइट छुटेपछि अब सोमबार सम्म कुर्नु को बिकल्प थिएन । सोमबार पनि पक्का थिएन । तर होटल वाला लाइ अलि बढी पैसा दिउँला भनेर फकाउदै थिएँ । क्यामराम्यान काठमाडौँ उडेपछी हामि होटल तिर लाग्यौ । सधै जस्तो ४ बजे पछी चिसो हावा चल्न थाल्यो अँध्यारो भैहाल्यो । पर्यटकहरुको कारणले जस्तो भने पनि रक्शी पाइने रहेछ ।
मोडल युवतीले वाइन खाने इच्छा गरेपछि हामीले एउटा वाइन किन्यौ । वाई वाई मैले काठमाडौँ देखि ल्याएको मासुको सुकुटी अनि रक्शी । बिरामी निस्किन सक्ने संभाबना थिएन चिसो ले । हामी संग अर्को बिकल्प देखिएन । हामीले लिएको होटलको रुममा सोफा टेबल पनि थियो, त्यसैले हामि आफ्नै कोठामा लाग्यौ । शुटिंग राम्रो भएकाले हामि खुसि नै थियौ । अलि
समय एडिटिंगमा बिताउदा राम्रो भिडियो बन्ने हाम्रो निष्कर्स थियो । कुरा हुदै गयो उसले आफ्नो मोडलिंग को बारेमा बताई । मैले सोधे कस्तो मोडल लाइ राम्रो भन्ने ? उसले भनि जो ब्युटिफुल छ अनि जसमा सेक्स अपिल छ । मैले के लाई सेक्स अपिल भन्छौ भने, उसले मान्छे मा भर पर्छ कसैको आँखामा हुन्छ कसैको ब्रेस्ट मा कसैको हिप मा भनि । मैले तिम्रो के मा छ जस्तो लाग्छ भनेर सोधे उसले प्रतिप्रश्न गरि मलाई हेर्दा पहिला तपाइको के मा आँखा जान्छ ?
मैले भने ब्रेस्टमा । उसले भनि त्येसो भए मेरो ब्रेस्ट मा त्यो अपिल छ । हाम्रो यस्तै यस्तै कुरा हुदै थियो । उ शौचालय गइ मैले आफ्नो आइफोनले उसको फोटो र भिडिओ खिचे अनि उ आएपछि उसलाई देखाउदै भने तिम्रो हिप पनि कामको रैन रहेछ । उ हासी ! मैले उसलाई हेर्न दिए उसले मेरो फोटो एल्बम खोलेर हेर्न लागि । शुटिंग गर्दा मैले पनि उसका केहि फोटो लिएको थिए उसले त्यो पनि हेरिछ । मैले उसलाई आफु संगैको कुर्सीमा बस्न भन्दै बोलाए र भने आउ एक दुइटा फोटो संगैको पनि लिउन सम्झनको लागि उ संगैको आएर बसी । हामि दुबैलाई लागिसकेको थियो मैले उसलाई गला लगाउदै आइ फोन बाट केहि फोटो लिए ।
अनि जिस्किदै उसको स्तन लाइ नछोएर तर फोटोमा स्तन समातेको जस्तो आउने गरेर हात राखेर फोटो लिए र भने मोडलको सेक्स अपिल संग त फोटो लिनै पर्यो नि । उ हासी र भनि प्लिज यस्तो नगर्नु न । अरु ले देख्यो भने । मैले भने अरुलाई नदेखाउने खालको के छ र मैले तिम्रो ब्रेस्ट छोको पनि छैन नि । अरुलाई नदेखाउने गरि खिच्ने भए त तिम्रो बुबु समातेरै खिच्छु नि । उ हासी ! मैले ल त्यो डिलिट गर्ने गरेर खिच्छु भने र आफ्नो हात उसको स्तन माथि राखे । खिचेर देखाए र उसकै अगाडीडिलिट गरे । फेरी अर्को खिचे तर यसपटक बुबुमा हात राखे जस्तो हैन समातेको जस्तो गरेर । अनि उसलाई उभिन लगाए र भने अब अर्को सेक्स अपिल भाको कुरा संग फोटो लिन्छु । उसको पाइन्ट माथिबाट चक किस गरे जस्तो गरेर फोटो लिए ।
यस्तै हर्कत गर्दा गर्दै मैले आफ्नो ओठ उसको मा पुर्याए र किस गरे । लामो टंगकिस पछी पातलो उसको शरीरलाई जुरुक्क उचाले र बोकेरै किस गर्न लागे । बेडमा पल्टाउदै बाहिरै बाट उसको दुध माड्न थाले । उसको टिसर्ट खोले एउटा हातमा एउटा बुबु लिए अर्को बुबुको निपल चुस्न थाले उ अब उत्तेजनामा आइसकेकी थिइ । मैले उसको माथिको लुगा सबै फुकाले । उ पनि कम कि थिइन । मलाई पनि अर्धनग्न बनाइ मेरो छाती चुसी, चाटी म भन्दा पहिला मेरो पाइन्ट खोलेर लाड़ो चुस्न थालि । अनि एकछिन पछी हामी ६९ मा बसेर एक अर्काको लाड़ो पुती चुस्न चाट्न थाल्यौ । म अब तयार थिए मलाई लाग्यो उ पनि तयार छ मैले आफ्नो पिजिसन फेरेर उसको पुतीमा लाड़ो हाल्न खोजे, उसले मलाई रोकी र आफ्नो सुट केस भए तिर लागि मैले पनि कन्डम ल्याउन गएको अड्कलमा कुरे तर उसले त भाइब्रेटर अन गरि र बेडमा पल्टेर पुती भित्र छिराई । म छक्क परें र मैले सोधे – म तयार थिए
किन त्यो चाहियो ?
उसले उसको चाकमा मेरो लाड़ो छिराउन भनि मैले त्यसै गरे । उसको पुतीमा भाइब्रेटर थियो अनि चाकको प्वालमा मेरो लाड़ो । मैले आफ्नो लाडोलाई चाक मा नै हालेर भए पनि यो
पटक झार्ने सोचे । उ भन्दै थि, हो नि त डबल मज्जा भनेको । उ कराउदै थि । अझै….अझै…अझै । उ झरी, म पनि झरे । मलाई उसको पुती चिक्नु थियो, मैले बिस्तारै उसलाई फेरी उत्तेजित बनाउने कोसिस गरे । दुध चुसे माढ़े त्यो पहिले झरेको पुतीमा घिन नमानी जिब्रो हालेर चाटे । उ फेरी उत्तेजित भइ फेरी उसले भाइब्रेटर चलाई, अनि पुतीमा हाली । मैले यसपटक अलि बल गरे उसले पुतीमा हाल्न हाल्न खोजेको, दिइन । बरु मेरो लाडोलाई मुखमा हालेर चुसी । तल माथि दया बाट चाटी । म फेरी झरे । मैले धेरै पटक कोसिस गरे तर
उसले कहिले आफ्नो बुबुको बिचमा मेरो लाड़ो राखेर मेरो झार्दिन्थी, कहिले चुसेर कहिले म उसको चाक चिकेर झार्थे ।
तर उसले मलाई कैले पनि पुती चिक्न दिइन । मैले उसलाई सोधे किन यस्तो गरेको । उसले भनि यो मेरो हुनेवाला श्रीमान लाई उपहार हो । म मेरो कुमारीत्व मेरो लोग्ने बाट टुटाउन चाहन्छु ।मैले पुतीमा छिराउन कोसिस गर्दा उसले म कराइदिन्छु भनेर तर्साई । हाम्रो चिकिखेल हरेकदिन रात हुन्थ्यो तर पुती चिक्न नपाएर म पागल बनेको थिए । पुती र चाक दुवै चिक्न पाउदा पुतीको रहर नहुदो रैछ तर पुतीमा छिराउन नपाउने भनेपछि ध्यान नै त्यसमा जाँदो रहेछ । आइतबार सम्म फकाउँदा फुलाउँदा केहिगर्दा पनि भएन । थर्काउने त कुरै भएन । आइतबार राति मैले उ बाहिर गएको बेला भाइब्रेटर लुकाई दिए । मुस्तांगमा पाइने यार्शागुम्बा हामी दुबैले खायौ । अनि शुरु भयो हाम्रो यौन यात्रा । हामि दुवै नांगै थियौ । मैले पहिला लामो किस खाए, सधै जस्तो बुबु चुसे माड़े । उसले मेरो घाँटीमा लव बाइट दि । मेरो लाड़ो समातेर एकछिन खेलाई अनि चुस्न थालि । मैले आफ्नो पालोमा आफ्नो सबै शक्ति लगाएर उसलाई उत्तेजित बनाउने कोसिस गरे ।
आफ्नो पुरै जिब्रो उसको पुतीमा हालेर चलाए, पुती भिजेर निथ्रुक्क भएको थियो । मैले अन्जान बनेर उसको चाकमा लाड़ो हाल्न लागे उ दौडिएर भाइब्रेटर लिन गइ, भेटिन, सबै तिर हेरी, मलाई सोधी मैले थाहा छैन भने, उ पागल जस्तो भएकी थि । मैले ठिकै छ चाक चिकिदिन्छु आउ भने उसलाई समाते र चाक चिक्न थाले । पछाडिबाट चाक पनि चिक्दै थिए अनि दुधु पनि माड्दै थिए । उ आफैं औलाले पुती चलाउदै थि, मैले फेरी उसको पुती चाटे । अब उ सहन नसक्ने भई र भनि प्लिज मेरो पुतीमा छिराई देउ, म हारे म अझै कुमारी बस्न सक्दिन । मैले उसको पातलो जिउ उचाले र उभिएरै आफ्नो लाड़ो उसको कसिलो पुतीमा छिराए ।
उ कराई आह आह आआआआआह् । दुइ हातले बोकेर उभिएरै मैले धेरै बेर चिके अनि घोप्टो पारे फेरी चिके, उत्तानो पारेर चिके । धेरै बेर पछी उसको झर्यो मेरो पनि झर्यो । मैले मेरो लाडोको विर्य उसको बुबुमा अनि अलिकता मुखमा झारिदिए । यार्शागुम्बाले होला उसमा यौन चाहना अझै थियो\_ अनि उ भन्दै थिइ भाइब्रेटर मा यो कुरा कहाँ पाइन्छ र ! उसले मेरो लाडोको झर्न बाकी सबै फुसी चुसी र सफा बनाइ ? फेरी यस्तो मजा आउला भन्ने मैले सोचेकै थिइन । हामीले धेरै पटक त्यो रात चिकामारी खेल खेल्यौ । भोलिपल्ट प्लेन उड्यो, हामि काठमाडौँ आयौ । उसको घर आयो गाडी बाट झर्न लाग्दा मैले उसको कानमा खुसुक्क भने “यु आर नो मोर भर्जिन” (YOU ARE NO MORE VIRGIN) । उ हांसी र भनि “यु किलर” (YOU KILLER) !!!!!
2min.दूध चुसे अनि……….